३० जेठ, काठमाडौं । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले गत चैत्र ११ गतेदेखि सुरु गरिएको लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै केहि खुकुलो बनाउने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषदको त्यो निर्णय बिहिबार सूचना,सञ्चार तथा प्रबिधि मन्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता यूवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराए ।
त्यसमा उनले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरिएको र त्यसलाई मापदण्ड बनाएर लागू गरिने जानकारी गराएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार उद्योग, वाणीज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले व्यवसाय सन्चालन सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ ।
के के छन त मन्त्रालयले बनाएको उद्योग व्यवसाय सन्चालन सम्बन्धी मापदण्डमा ?
मन्त्रालयले रेस्टुरेन्ट, डिमार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट तथा अन्य पसलहरू र उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । सरकारले ती सेवा सुरु गर्दा अनिवार्य रुपले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने जनाएको छ ।
रेस्टुरेन्ट कसरी खोल्ने ?
सरकारले होमडेलीभरी गर्ने किसिमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्ने निर्णय गरेको थियो । सोहि निर्णको आधारमा निस्चित समयसम्म मात्र होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न पाउने मापदण्ड तयार गरिएको छ । त्यस्तै प्रत्येक टेवलमा सेनेटाईजरको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गर्नु पर्ने, भौतिक दुरी कम्तीमा १ मीटरको कायम गर्नु पर्ने पनि मन्त्रालयको मापदण्डमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सबै कर्मचारीलाई सफाईमा ध्यान दिन लगाउने तथा प्रत्येक दिन कर्मचारीको शरिरको तापक्रम नाप्नु पर्ने, साबुन पानीले हात धुने, स्यानिटाईजरको प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाईएको छ ।
सौचालयको नियमित सफाई गर्नु पर्ने तथा टेवलहरुलाई दिनको कम्तीमा ३ पटक अनिवार्य डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्ने गरिको मापदण्ड बनाईएको छ ।
कसरी खोल्ने उद्योग ?
सरकारले उद्योग खोल्ने निर्णय गरे पछि सन्चालनमा आउने उद्योगहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आबस्यक पर्ने सवारी साधन मार्फत बासस्थानबाट उद्योगसम्म आउने जाने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
काम गर्ने श्रमिकहरुलाई आबस्यक भौतिक दुरी कायम गरेर मात्र काममा लगाउन पाईने छ । उद्योगलाई सम्भब भएसम्म सिफरटमा सन्चालन गर्ने, तथा पत्येक सिफ्ट सकिए पछि कार्यास्थललाई डिसइन्फेक्सन गर्ने गरिको मापदण्ड तयार परिएको छ ।
पसलहरु कसरी सन्चान गर्ने ?
मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार डिमार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट तथा पसलहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर निश्चित समय खोल्नु पर्ने छ ।
कार्यास्थलमा जानुपूर्व सबै कर्मचारीको तपक्रम नाप्नु पर्ने, सबुन पानीले हात धुन लगाउनु पर्ने, मास्क र पञ्जाको अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउनु पर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।
त्यस्तै काम गर्ने कर्मचारीलाई कार्यास्थलमै खाजा खाने व्यवस्था गर्नु पर्ने, आबस्यक भौतिक दुरी कायम गर्न लगाउनु पर्ने, बिद्युतीय माध्यमबाट भुक्तनी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा ग्रहाकले आफै सामान छन्ने भएमा उसलाई अनिवार्य रुपले स्यननिटाईजरको प्रयोग गर्न लगाउनु पर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिको छ ।